बिचित्र संसार Archives - Janakpur News
२१ करोडको भैंसी, जसले हरेक दिन पिउँछ फरक–फरक अंग्रेजी मदिरा
March 28, 2017	बिचित्र संसार050
एजेन्सी । भारतको सूरजकुञ्ड पर्यटन स्थलमा चलिरहेको सेकेण्ड कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा ल्याइएको २१ करोड मूल्यको भैसीको शोक अचम्मको छ । जुन कुरा पत्याउनै गाह्रो हुन्छ । ७ वर्ष १० महिनाको सुल्तान भैसा नाम गरेको भैसी हरेक दिन फरक–फरक अंग्रेजी मदिरा पिउने गर्छ । मदिरा खानुभन्दा …
March 28, 2017	बिचित्र संसार045
स्मार्टफोनमा आफूले चाहेको सामाग्री इन्टरनेटको सहायतामा हेर्न सकिन्छ । एक अध्ययनका अनुसार पुरुष भन्दा महिलाले स्मार्टफोनमा अश्लिल सामाग्री बढी हेर्ने गरेको तथ्य सार्जजनिक भएको छ । पोर्न साइट पोर्नहबले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार ७१ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोनमार्फत पोर्न सामग्री हेर्ने गरेका छन् । जबकि यो साइटमा स्मार्टफोनमार्फत पोर्न …
हेलिकोप्टर चढेर स्कुल पढ्न जाने दुनियाँकै भाग्यमानी बच्चा
March 28, 2017	बिचित्र संसार049
आफ्नो बच्चालाई स्कुल पुर्‍याउनका लागि कतिपय अभिभावकहरु पैदलै जालान् त हुनेले कार, बाइक जस्ता साधनको उपयोग गर्लान् । तर यहाँ एकजना व्यक्तिले आफ्ना छोरालाई स्कुल पुर्‍याउनका लागि हेलिकोप्टर नै उडाएका छन् । युक्रेनका पूर्व खेलमन्त्रीले आफ्नो छोरालाई हेलिकोप्टर चढाएर स्कुल पूराएका हुन् । पूर्व खेल राज्यमन्त्री …
March 28, 2017	बिचित्र संसार058
बेलायतीहरुको सहवासको समय निकै छोटो हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार बेलायती जोडीहरुको सहवास सत्र औसतमा १० मिनेटभन्दा कम समयको हुने गरेको छ। तर पाकक्रिडालाई पनि जोड्दा भने सहवासको समय १९ मिनेटको हुने गरेको छ ।यसको अर्थ बेलायतीहरु सहवासको मज्जा लिने समयको हाराहारी …
असामान्य टाउको भएका बालकलाई ‘हनुमानजी’ भन्दै ढोग्न आउनेको भिड
March 28, 2017	बिचित्र संसार046
विचित्रको शारीरिक अवस्थामा जन्मिएका एक बालकलाई हनुमानको अवतार भन्दै हेर्न आउनेको भिड लागेको छ । यो घटना हामी नजिकैको देश भारतको हो । बिहारमा बस्ने ३५ वर्षीया खालिदा बेगमले एक हप्ता अगाडि छोरा जन्माएकी थिइन्, जसको नाम राख्न बाँकी नै छ । भर्खर जन्मेको छोराको रुप-रंग …
विमानभित्र कपिलले सुनीललाई जुत्ता हानेका थिए, यस्तो छ पूरा विवरण
March 28, 2017	बिचित्र संसार, मनोरंजन067
कमेडियन कपिल शर्मा र उनका सहकर्मी सुनील ग्रोबरबीचको झगडा अहिले भारतीय मिडियामा व्यापक चर्चामा छ । अष्ट्रेलियाबाट फर्किने क्रममा विमानमै उनीहरुबीच झगडा भएको थियो र त्यसयता सामाजिक सञ्जालमा ‘वार’ गरिरहेका छन् । आखिर यी दुईबीच भएको के थियो त ? एक प्रत्यक्षदर्शीको हवाला दिँदै हिन्दुस्तान टाइम्सले घटना विवरण बाहिर ल्याएको …
सन्नी लियोनीले घरमै लगेर पोर्न फिल्म हेरेको खुलासा
March 28, 2017	बिचित्र संसार051
मुम्बई । पोर्न स्टार एवम् बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोेनीले आफ्नो पोर्न फिल्म यात्राबारे खुलासा गरेकी छन् ।आफू पोर्न स्टार भए पनि पहिलो पटक १९ वर्षको उमेरमा मात्र आफूले यस्तो फिल्म हेरेको उनले बताएकी हुन् । अहिले उनको यस्तो अभिव्यक्तिले भने भारतीय सिने नगरीमा पनि चर्चा सिर्जना गरेको छ । उनका …
आगो भएको पान खान भिड (भिडियो)
March 22, 2017	ओनलाईन पत्रिका, बिचित्र संसार0326
काठमाडौं । केही महिना अघि पाकिस्तानका एक हजामले कैचीले होइन आगोको ज्वालाले कपाल काटेको समाचार भइरल भयो । उक्त हजामले आगोसँग खेलेर ग्राहकहरुले भनेजस्तो कपाल काट्थे । त्यस्तै अहिले ‘फायर पान’ अर्थात ‘आगो भएको पान’को चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ । भारतीय तथा दक्षिण एसियालीहरुले रुचाउने पानलाई नयाँ–नयाँ तरिकाले …
महिला सांसदबाट सेक्सबारे संसदमा अनौठो प्रस्ताव !
March 21, 2017	बिचित्र संसार0272
एजेन्सी । अमेरिकाको टेक्ससकी एक डेमोक्रेटिक महिला सांसदले हस्तमैथुन गर्ने मानिसलाई कार्वाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । जुन कुरा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । जेसिका फर्रार नाम गरेकी सांसदले हस्तमैथुन गर्ने मानिसलाई १०० सय डलर जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । यस्तो कार्य बच्चाको अस्तित्वको …
March 18, 2017	बिचित्र संसार0119
भूकम्पका कारण काठको टेको लगाएर अड्याइएका कैयन् मन्दिर देख्न पाइन्छ काठमाण्डौमा । कहिले टेको फुस्किन्छ र मन्दिर भत्किन्छ भनेर मानिसहरु त्राहिमाम हुन्छन् । तर चीनमा एउटा यस्तो प्राचिन मन्दिर छ जुन सदियौँ देखि एउटै टेकोमा अडिइरहेको छ । चीनको दक्षिणपश्चिमस्थित पहाडी क्षेत्रमा रहेको गंलु मन्दिर यस्तो …